Wasiirka Caafimaadka oo balan-qaad u sameeyay dadkii ku dhaawacmay weerarkii shalay ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasiirka Caafimaadka oo balan-qaad u sameeyay dadkii ku dhaawacmay weerarkii shalay ee Muqdisho
Wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xaaji C/nuur (Madeer) oo booqasho ku tagay Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa balan-qaad culus u sameeyay dadkii dhaawacyadda culus kasoo gaaray qaraxii shalay ka dhacay agagaarka xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya, isagoona sheegay in dadkaasi loo qaadi doono dalka dibaddiisa.
Wasiirka oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inuu aad uga mahad-celinaayo dadaalka dheeriga ah oo ay muujiyeen dhaqaatiirta Soomaaliyeed, isagoona tilmaamay in dadkii dadkii dhaawacyadda cullus qaba islamarkaana xaaladooda halista ay tahay in dibadda lagu soo daweyn doono.
“Dadka qaba dhaawacyada daran ee dalka gudahiisa waxba looga qaban karin waxaa loo qaaddi doonnaa caafimaad dibadda ah, hadii ay ahaan laheyd dalalka deriska ah ama dalal kale ee aynu saaxiibada nahay” Sidaas waxaa yiri wasiirka caafimaadka Maxamed Madeer.
Dhinaca kale, wasiirka ayaa tacsi u diray dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay dadka uga dhinteen weerarkii shalay ka dhacay agagaarka xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho gaar ahaan dadkii ku dhintay Hoteelka SYL oo bur-burka xoogan u geystay qaraxa, isagoo sidoo kale sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid aad looga xumaado.
Si kastaba ha ahaate, hadalka kasoo yeeray wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xaaji C/nuur (Madeer) ayaa imaanaya xilli maalintii shalay uu qarax ismiidaamin ah ka dhacay agagaarka xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya una dhaw Hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho, waxaana sida la sheegay weerarkaasi ku geeriyootay dad lagu qiyaasay ilaa 30-ruux, halka tiro intaas ka badanne ay ku dhaawacmeen.
Waxaa islamarkiiba weerarkaasi sheegtay Xarakada Al-shabaab, waxayna Shabaabku sheegeen inay weerarka ku dileen askar badan iyo mas’uuliyiin sarre ee ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, waa sida ay hadalka u dhigeenee.